(90898) 1997 CQ19
(90900) 1997 EA2
Ny 2001 RU10 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 RM37 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 RD89 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 RF141 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SA56 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 ST104 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 SN119 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SC175 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 SF253 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 SD283 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SN343 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TK91 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 TN102 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 TA117 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TG158 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 TW210 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TD231 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UP7 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2001 UQ33 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 UD34 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 UF38 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 UJ49 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 UD75 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 UW109 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UM122 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UZ146 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 UQ153 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UM178 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 VU16 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 VA44 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 WQ13 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 WB38 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 XC5 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2001 XL25 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1997 CW27 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 XJ38 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 XV43 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 XV57 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 FR79 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 XS133 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 XV183 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 XS199 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 XV205 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 XX229 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 XO259 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 YN5 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2001 YA24 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 YS41 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 YE141 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2002 AW16 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...